Hidhamtoota 24 hagganootnii fi qondaalotni ABO kan keessatti – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHidhamtoota 24 hagganootnii fi qondaalotni ABO kan keessatti
[SBO – Fulbaana 04,2020] Hidhamtoota 24 hagganootnii fi qondaalotni ABO kan keessatti argaman maraaf mirgi wabii qarshii 10,000, kudhanii eegamuufiin barameera.
[SBO – Hagayya 31,2020] Xalayaa Himannoo ABO’n deeggartoota, miseensootaa fii hogganootni dhaabaa seeraan ala hidhamuu fii Waajjiroonni dhaabaa baayyeen cufamuu addatti ammoo Waajjirri Muummee ABO Gullalleetti arkamu humna Polisii mootummaatiin dhunfatamuu laalchisuun dhiheesse irraa ka’uun, Bordiin Filannoo Biyyooleeysaa, Polisiin Finfinnee fii Naannoo Oromiyaa deebisaa akka kennan gaafatee jira.
After weeks of badgering, the NEBE has finally asked Addis Ababa and Oromia Police Commissions to explain the sweeping detention of OLF leadership and the raiding of its offices.
Hogganoonni fi miseensoti ABO wabii birrii 10,000tin akka bahan murtaa’e
(bbcafaanoromoo)–Hogganoonni fi miseensoti ABO galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman namootni 24 wabii birrii 10,000tin akka bahan murtaa’e.
Qondaaltonni ABO kanneen akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Dr. Shuggux Galataa, Obbo Mikaa’el Booranii fi Lammii Beenyaa dabalatee namootni biroo galmee kana jalatti himataman 24 Jimaata waaree booda mana murtii Aanaa Magaala Sulultaatti dhihaatan.
Manni murtichaa tokkoon tokkoon isaanii wabii birrii 10,000tin akka bahan murteesseera.
Beellama amma duraa irratti poolisiin qorannaa xumuruu isaa erga beeksiseen booda guyyoota 15 keessatti abbaan alangaa himata yoo hin banne namootni kunneen akka lakkifamaniif murteessee ture.
Dhadhacha Jimaata oole kanaanis, maamiloota keenya irratti himatni hin banamne, poolisiiinis mana murtiitiif gabaasa hin kennine jechuun abukaatota isaanii keessaa tokko kan tahan Obbo Kadir Bulloo BBC’tti himan.
Namootni kunneen seeran ala hidhamanii waan jiraniif gadhiifamuu qabu jechuun abokaatonni falmuu himu.
Abbaan alangaa gama isaatiin guyyaa 15 kennamee ture keessatti Poolisiin ajaja sana yeroodhaan nu biraan waan hin geenyeef himata banuu hin dandeenye kanaafis guyyaan dabalataa 15 nuuf haa kennamu jechuun mana murtii gaafateera.
Mormii gama lamaanii kan dhageeffate manni murtichaa Abbaan alangaa guyyaa dabalataa 15 gaafate kufaa gochuun shakkamtoonni 24 tokkoon tokkoon isaanii wabii birrii 10,000nin akka bahan ajaja dabarseera.
Kanaan alattis yeroo hidhamanii turan kanatti seeran ala hidhamuu irraa kan ka’e miidhaan irra gahee yoo jiraates mirgi gaafachuu isaanii akka kabajamuufis ajajuu Obbo Kadir himaniiru.